प्रनिश थापा , चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रबक्ता (डिएसपी) प्रभु प्रसाद ढकाल हेर्ड्क्वाटर तानिएका छन् । उनलाई असोज २९ गते मुख्यालयले तानेपनि ढिलो गरी मात्रै आइतबार खबर प्रकाशित भएको हो ।
नेपाल प्रहरीका प्रबक्ता (डिआइजी) शैलेश थापा क्षेत्रीले ढकाललाई मुख्यालय काज सरुवा गरेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ ।
उनलेे नियमितरूपमा गर्ने सरुवा अन्तर्गत उनलाई एक साता अगाडि नै काज सरुवा गरेको क्षेत्रीले बताएका हुन् । अब चितवनमा डिएसपी दुर्गा रेग्मी आउने भएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक सबेन्द्र खनालले संगठन भित्रका गलत ऐजेरुहरु यहाँ बस्नु भन्दा तस्करहरुसँग गए हुन्छ भन्दै त्यसपछि बल्ल थाहा पाउछन् भनेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै चितवनबाट ढकाल हेडक्वाटर तानिएका छन् ।
स्मरण रहोस् चितवन जिल्लाका एसपी सुशील सिंह राठौरको इमान्दारीता र सोझोपनको भरपुर फाइदा लिँदै आइरहेका डिएसपी प्रभु प्रसाद ढकालले गरेका अन्य कर्तुत पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनलाई कारबाहीस्वरुप हेडक्वाटर तानिएपछि इमान्दार र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरु खुसीले गदगद भएका छन् भने उनको बर्दीको आडमा गलत गर्नेहरु निरिह बनेका छन् ।
डिएसपी ढकाल मुख्यालय तानेको खबर प्रकाशित भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तात्तिएको छ । अधिकांशले डिएसपी ढकालले पदको दुरुपयोग गरेकोले तत्कालै बर्खास्त गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन् । भने, बिरोध जनाउनेहरुको संख्या समेत थपिदै गएको पाइएको छ ।
होटलमा पुगेका डिएसपी ढकालको मध्यरातमा लफडा
गएको असोज १२ गते शुक्रबार राती झन्डै १ बजे रत्ननगरस्थित निपनीमा रहेको होटल स्टार ब्यांक्युटमा पुगेर आतंक मच्चाएको छ । पर्यटकीय नगरी सौराहामा समेत आफ्ना हनुमानलाई पठाएर नाँङ्गाे नाच नाँच्ने प्रहरी प्रबक्ता समेत रहेका डिएसपी प्रभुप्रसाद ढकालले गएको असोज १२ गते शुक्रबारको उनलेे गरेको आतंकबारे मिलाउन थुप्रै प्रभूत्वहरुको शरणमा पुगेको एक हवल्दार दर्जाका प्रहरीले आफ्नु नाम नबताउने सर्तमा बताए । सुरुमा सौराहा पुगेर अत्याधिक मदिरा पिएका डिएसपी ढकालले सिताराम प्रहरी चौकीमा दरबन्दी भइ लामो समयदेखि बिवादतमा तानिरहेका प्रहरी जवान निशान लामिछानेलाई पुनः मदिरा ल्याउन सौराहा पठाएको स्रोतले बताएको छ ।
मदिराले राम्रोसँग बोल्न र हिड्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका र होश हवाश नै गुमाएका प्रहरी जवान लामिछानेले पुन मदिरा लिएर आउँदा होटेल स्टार ब्यांक्युटको गेट नजिकै रहेको विद्युतको पोललाई आड लगाइ बेहोस अवस्थामा झण्डै दुई घण्टा भुइमै सुतेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
पहिला टाँडीमा घुमुवाका रुपमा रही अत्याधिक बदनाम भइ पुनः जिल्लामा तानिएका प्रहरी जवान निशान लामिछानेलाई सवारी ड्राइभर बनाइ एक महिला, एक अर्का पुरुषसहित मध्यरातमा ब्यांक्युट पुगेका उनले मदिरा माग्दा नपाएपछि कोठा मात्रै भएपनि उपलब्ध गराइदिन होटल सञ्चालकहरुलाइ समेत अनावश्यक रूपमा दबाब दिएका थिए । उनको दवाब र रातीको रवाफ डढेलो सरी जिल्लाका एसपी हुँदै प्रान्तका डिआइजी सँग मात्रै पुगेन की केन्द्रकै प्रमुुुख आइजी सर्वेन्द्र खनालको कानसम्म नैै पुग्न भ्यायो ।
डिएसपी ढकालले जिल्लामा बस्दा गरेका अनेक कर्तुतहरुको सुक्ष्म ढंगले नियालिरहेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले असोज २७ गते आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको भवन उद्वाघटन गर्ने क्रममा समेत तीन नम्बर प्रदेशका डिआइजी दीपक कुमार थापालाई निजलाइ तुरुन्तै कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको समेत ती हवल्दार बताउँछन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट बदनामी भएका हवल्दार र जवान डिएसपी प्रभुप्रसाद ढकालका सहयोगी र प्रिय पात्र हुने गरेका थिए । लोथर चौकीमा अत्यन्तै गन्हाएका कारण त्यहाँका इन्चार्जले फर्काएका असई नरेश श्रेष्ठ होस् या पदमपुर प्रहरी चौकीबाट लखटिएका हवल्दार आत्मराम कार्की । अनि ईलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीबाट लखेटिएका निशान लामिछाने होस् वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको दुम्कीबासमा इन्चार्ज रहेका प्रहरी निरीक्षक धजेन्द्र कार्की नै । उनीहरुबीच डिएसपी ढकालको अचम्मको मित्रता रहेको समेत चितवन प्रहरी भित्रभित्रै नै चर्चा चल्ने गर्दछ । मित्रता हुनुको पर्दा पछाडी आफ्नो संरक्षणमा उनीहरुले देखाइदिएको ठाँउमा अवैध कार्य गर्न लगाएर उठन्तीमा संलग्न भएको हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ ।
डिएसपी ढकालको जुवाअखडालाइ संरक्षण
यता, जिल्लाबाट लखटिएका डिएसपी ढकालद्वारा संरक्षित एक जुवाको अखडाबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कानसम्म पुुुुगेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले लाखौं रुपैयाँ नगद सहित आधा दर्जन जुवाडेलाइ पक्राउ गर्न सफल भएको छ । आइजी खनालको निर्देशनमा विशेष किसिमले छापा हान्दा जुवाडेहरु पक्राउ परेको एक सइ दर्जाका प्रहरीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार केन्द्रबाट नै निर्देशन आएपछि प्रहरीले जुवाडेलाइ नगद सहित पक्राउ गरेको बताइएको छ । ती प्रहरीका अनुसार भरतपुरस्थित वसन्त चोकदेखी दक्षिण साइडमा रहेको सिमेन्ट फ्याक्ट्रेरीको छेउमा भरत बानियाँको तीन तल्ले घरभित्रै भुमी रेग्मी नामको खेलाडीले असोज २७ गते आइतबार रातीको अन्दाजी साँढे २१:३० बजेको समयमा जुवा खेलाउदै गरेको अवस्थामा रेग्मीसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पुराना प्रहरीलाई बिश्वास गर्न नसके पछि माथिको आदेश बमोजिम नै माडी चितवन दरबन्दी भएका एक प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा रहेको नयाँ प्रहरीको टोलीले उनीहरुलाइ नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । नियन्त्रणमा लिएका मध्य नामुद एवं चर्चित खेलाडी भुमी रेग्मीको साथबाट प्रहरीले दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ नगद समेत बरामद गरेको स्रोत बताउँछन् ।
ती सइ दर्जाका स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रहरीको टोली एक घण्टा ढिलो गरेर जुवा अखाडामा गएको भए ठुलै हात पर्ने थियो तर, प्रहरी चाँडै आएकोले थप सन्तोषजनक नतिजा हात पर्न सकेनन् । यद्यपि , एसपी साबले कसैलाई थाहै नदिइ नयाँ टोलीका रूपमा रहेका प्रहरी निरीक्षक सहितलाई पठाइ नियन्त्रणमा लिन सफल हुनुभयो । उहाँको त्यो महानता हो । उनी भन्छन् : त्यस जुवा अखाडामा डिएसपी ढकालले समेत अनुचित लाभ लिने गर्थ्यो । यहीँ काण्डमा पनि उनलाई तानेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
एसपीको सोझोपनको फाइदा उठाउदै प्रहरी
यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी सुशील सिंह राठौर इमान्दार प्रहरी अधिकृत मध्य गनिन्छन् । घुस्याहा प्रहरीलाई उनलेे देख्नै सहदैनन् । उनको एउटा मात्रै सिद्वान्त छ : जनमैत्री हुनु । अनि पछिल्लो समय उनी यसरी आक्रमक भएका छन् की जुन पछिल्लो समयमा हुने गरेको अपराधीक गतिविधि यो समयमा हुन पाएका छैनन् ।
घुस लिने र दिने दुबै अपराध हुने र त्यसलाई संरक्षण गर्नु नै त्यो सबैभन्दा बढी ठूलो अपराध हुने उनको निष्कर्ष छ तर, यताकदा केही प्रहरी उनलाई बदनाम गराउन लागिरहेका छन् । उनलाई गुम्राहमा राखेर बर्षौं देखी जिल्लामा एकछत्र राज गर्नेको समेत कमि छैनन् यहाँ । जस्ले उनलाई आगामी दिनमा बिवादतमा पार्ने लगभग पक्कापक्की छ ।
सिताराम प्रहरी चौकी दरबन्दी भइ जिल्लामा घुमुवाका रूपमा खटेका प्रहरी जवान निशान लामिछानेको अशुली काण्डका कारण यहाँका स्थानीय सबैभन्दा बढी पीडित भएका छन् । चोरी नियन्त्रणका लागी भन्दै अघिल्लो कार्यालय प्रमुखले घुमुवाका रूपमा परिचालन गरेको भनेपनि उनको ध्यान चोरीलाई नियन्त्रणमा लिनु भन्दा पनि अशुली धन्दामै सिमित हुँदा स्थानीय पीडित भएका हुन् । कसरी हुन्छ स्थानीयलाई दु:ख दियौं र अशुली गरौं भन्ने नै उनको प्रमुख जोड देखिएको छ ।
देखावटी रूपमा जिल्लाका डिएसपीको सवारी ड्राइभरका रूपमा उनी त्यहाँ कार्यारर्त रहेको भनिए पनि उनी लामो समयदेखिको अशुली कार्यमा सक्रिय रहिआएका छन् । यस अघि जिल्लामा हुँदा बदनाम भएपछि इलाकामा पठाइएको भएपनि उनी अझै सुध्रिएका छैनन् । त्यसपछि उनलाई दरबन्दीमा नै फिर्ता गर्न भनी गृहबाट नै परिपत्र समेत भयो । तर, रवाना लिन भने उनलेे हिच्किचाए ।
र, अहिले जिल्लाकै घुमुवामा रूपमा परिचालन भइ अस्वभाविक ढंगले रकम उठाइरहेको स्रोतले बताएको छ । निज अशुली धन्दामा मात्रै केन्द्रित हुँदा स्थानीय त्रसित भएका छन् । तर, सुन्दैनन् यहाँका प्रशासन । यतिमात्र कहाँ हो र ? गएको असोज १२ गते शुक्रबार राती झन्डै १ बजे रत्ननगरस्थित निपनीमा रहेको होटल स्टार ब्यांक्युटमा पुगेर आतंक मच्चाए । मदिराले राम्रोसँग बोल्न र हिंड्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका र होश हवाश नै गुमाएका प्रहरी जवान निशान लामिछानेले पुन: मदिरा लिएर आउँदा होटेल स्टार ब्यांक्युटको गेट नजिकै रहेको विद्युतको पोललाई आड लगाइ बेहोस अवस्थामा झण्डै दुई घण्टासम्म भुँइमै सुतेको अवस्थामा फेला परेको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै, घुमुवाका रूपमा जिल्लामा खटेका प्रहरी जवानद्वय इस्यु मियाँ धोबी, र प्रकाश श्रेष्ठको अशुली त छदै थियो लोथर चौकीमा हुँदा समेत अत्यन्तै गन्हाएका कारण त्यहाँका फर्काएका असई नरेश श्रेष्ठ होस् या पदमपुर प्रहरी चौकीबाट लखटिएका हवल्दार आत्मराम कार्की उनीहरु समेत जिल्लाभरकै बिवादित प्रहरी मध्य रहेको असइ दर्जाका एक प्रहरीले आफ्नु नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिए । उता, लामो समयदेखि मुद्दा फाँटमा कार्यारर्त सइ शैलेन्द्र खड्का, प्रहरी हवल्दार बिष्णु मल्ल, प्रहरी जवान बिष्णु पौडेलको दरबन्दी जिल्लामा छैनन् । खड्काको दरबन्दी ईलाका प्रहरी कार्यालय पाण्डोन कैलाली भए पनि उनी सहित पौडेल र मल्लले लामो समयदेखि जिल्लामा एकछत्र राज गर्दैआएका भाग्यमानी प्रहरी हुन् । यस अगाडी ईलाका प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु बाणगंगामा दरबन्दी परेको भएपनि रवाना नबुझेका खड्का बितेको दस बर्षदेखी मुद्दा फाँटमा रजाइँ गरेर बसेका छन् ।
त्यस्तै, मल्ल पनि दरबन्दीमा नगएको दस बर्षभन्दा बढी भयो तथापी उनलाई पनि अझै हटाइएको छैनन् , एक प्रहरी जवान भन्छन् : यदी उनलाई त्यहाँबाट नहटाउने हो भने कार्यालय प्रमुखको नाम नै बदनाम गर्दैनन् भन्न सकिन्न । त्यस्तै, ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका हवल्दार नारायण कुँवरको समेत अशुली धन्दा दुई गुणाले वृद्धि भएको छ । उहींं समय ३ नम्बर प्रदेशका तत्कालीन एआइजी केशरीराज घिमिरेले धेरै गुनासो आएपछि हवल्दार कुँवरलाई जिल्लामा थन्क्याएको थियो । यद्यपि, एआइजी घिमिरेको अवकाशसंँगै उनीहरुलेे दरबन्दीमा भन्दा पनि महत्वपूर्ण ठाउँको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
र, अशुली धन्दालाई तीव्रता दिदै गएका छन् । उनलेे त्यहाँको रवाना नबुझी हाल जिल्लाको सादा पोशाकमा कार्यारत रही जयमंगला, जुटपानी, जिरौना क्षेत्रसम्म पुगी असुली धन्दालाई तीव्रता दिएका छन् । तर, जिम्मेवारको अख्तियारी पाएको निकाय प्रहरी मुख्यालयले भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैनन् । जस्ले गर्दा यतिबेला घुमुवा प्रहरीहरु जिल्लामा एकछत्र राज गर्दैआएका छन् । आर्थिक काण्डमा नलाग्न, स्वच्छ भइ काम गर्न प्रहरी मुख्यालयले बारम्बार आदेश त दिन्छन् । तर, उक्त आदेशलाई नै चुनौती दिन माहिर कर्मचारीहरु आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै खोक्रो भाषण गरिरहेका हुन्छन् ।
मुख्यालयको निर्देशन/ आदेश र परिपत्र एवं पत्राचारलाई समेत चुनौती दिएका केही कर्मचारीले ३ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई टेर्ने त कुरै भएनन् । हवल्दार मिरा केसीको दरबन्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा भएपनि लामो समय देखी ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरमा कार्यारर्त रहिआएका छन् । सबैलाई दरबन्दीमा रवाना गर्न चटारो हुने कार्यालय प्रमुखले मिरा केसी जस्ता जागिरको दौरानमा जिल्लामा मात्रै एकछत्र राज गरेर बसेका र जरा गाड्ने आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई चाहिँ दरबन्दीमा फिर्ता नगर्ने ?
भनी जवान दर्जाको एक प्रहरीले प्रश्न समेत राखेका छन् । दरबन्दी भएको क्षेत्रमा नपठाउने, काजबिना लामोसमयदेखी घुमुवा बसेर आतंक मच्चाउने हो र बदनाम प्रहरीलाई काखी च्याप्ने हो भने प्रहरी नियमावली कस्का लागी ? सोझा कर्मचारीलाई मात्रै कार्यान्वयन हुने अनुसन्धान र प्रहरीको यो कामकार्वाहीले सिंगो संगठनमाथि नै शंका उब्जाएको छ । तत्कालै रवाना दिइ निजहरुलाई तोकेको दरबन्दीमा फिर्ता पठाउनु मुख्यालयको पहिलो जिम्मेवारी, कर्तव्य अनि दायित्व पनि हो । सो, कर्तव्यबाट मुख्यालय भाग्नुको सट्टा उचित बैकल्पिक ब्याबस्था खोज्नु अत्ति आवश्यक देखिएको छ ।